Musharixiinta oo ilaaladooda aan wadan doonin Sabtiga | KEYDMEDIA ONLINE
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in guud ahaan aminiga Mucaaradka uu xil ka saran yahay Xukuumadda maalinta Sabtiga ee soo socota.
MUQDISHI, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Midowga Musharixiintu ay ka soo tagayaan askarta ilaalisa amaankooda maalinta Sabtiga ah ee loo madlanyahay inuu magaalada Muqdisho ka dhaco bannaan-bax nabadeed oo ay hor kacayaan Mucaaradka.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la hadlayay taageerayaasha xisbiga Midowga Horumarka iyo Nabadda ayaa caddeeyay in ay Xukuumadda ku heshiiyeen in guud ahaan amniga Mudaharaadayaasha ay ilaaliso Dowladda.
Wuxuu carrabaka ku dhufay in Farmaajo uu ku marmarsiyoday bannaanbixii hore, askar ayay wateen Mucaaradka, sidaaas daraaddeed ay sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha kula Heshiiyeen inuu damaanad qaado amaankooda.
Xasan Sheekh, wuxuu Farmaajo ku eedeeyay inuu isku dayay dil 19 Febaraayo, isla markaana uu doonayay inuu laayo Madaxda Mucaaradka iyo dad Shacab ah oo bannaan-baxayay.
Wuxuu Xusay in Farmaajo doonayo in ay Musharixiintu ka jawaabaan daan daansiga uu wado oo ah in ay dagaallo ka qarxaan Muqdisho taas oo aan ahayn mid ka suurwda Mucaaradka si uu sheegay.
Xasan Sheekh, wuxuu xaqiijiyay in dibaxbaxa uu gaar u yahay Mucaaradka, oo Dowladda aan laga yeeli doonin ay dad wiifto ah ku soo dhex qariso bannaan-baxayaasha.